I-Nokia Bell Labs's world's records ezintsha kwi-fiber optics ukwenza amandla akhawulezileyo nangaphezulu kumanethiwekhi e-5G exesha elizayo
Kutshanje, i-Nokia Bell Labs ibhengeze ukuba abaphandi bayo babeke irekhodi lehlabathi kwelona nqanaba liphezulu labaphethe into enye kwimowudi yendlela enye yeekhilomitha ezingama-80, ubuninzi be-1.52 Tbit / s, elingana nokudlulisa i-YouTube yezigidi eziyi-1.5. iividiyo ngaxeshanye. Zine ...
Ngo-Matshi, i-2020, i-LightCounting, umbutho wophando kwimarike yokunxibelelana, kuvavanye ifuthe le-coronavirus entsha (i-COVID-19) kwishishini emva kweenyanga ezintathu zokuqala. Ikota yokuqala ye-2020 isondela esiphelweni sayo, kwaye umhlaba ukhathazwe sisibetho se-COVID-19. Amanani amaninzi ...
Ngo-Meyi., 2020, i-LightCounting, umbutho wophando lwentengiso owaziwayo, wathi nge-2020, umfutho wophuhliso lweshishini lonxibelelwano lokukhanya unamandla kakhulu. Ukuphela kwe-2019, ibango le-DWDM, i-Ethernet, kunye ne-fronthaul engenazingcingo inyuke, ikhokelela kwisish ...
Uphando luthi imakethi yemodyuli ebonakalayo iza kudlula kwi-USD17.7 yezigidigidi ngo-2025, ngeyona galelo likhulu livela kumaziko edatha
"Ubungakanani bemakethi yeemodyuli ezibonakalayo zifikelela kwi-USD7.7 yezigidigidi kwi-2019, kwaye kulindeleke ukuba iphindaphindwe kabini ukuya kwi-USD17.7 yezigidigidi ngo-2025, nge-CAGR (izinga lokukhula lonyaka) le-15% ukusuka ngo-2019 ukuya ku-2025. ” Uhlalutyo lwe-YoleD kunye neVeloppement (Yole) uMartin Vallo sai ...